musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Bhizinesi Kufamba » Kufamba kwebhizinesi kunoonekwa seyakawanikwa mune post-COVID US
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kumhanyisa Mota • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • misangano • nhau • vanhu • Rail Kufamba • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Vashandi vanogadzira uye vanonetsekana pavanofamba bhizinesi. Chechina chete (25%) vakati vanonzwa kushushikana kana vachishanda parwendo rwebhizinesi, ne32% vachiti havanzwi musiyano uye vakasara 43% vanonzwa kushushikana pavanoshanda pavanofamba.
Vanopfuura chetatu chevashandi veUS vanoti pfungwa dzakanakisisa dzebhizinesi dzinoitika pavanenge vachifamba mubhizinesi.
Chete 26% yevashandi veUS vanofunga kuti kumeso-kumeso misangano yakafa.
74% yevashandi veUS vanofunga kufamba bhizinesi uye mumisangano-mu-munhu inodiwa kuitira ramangwana rebhizinesi.
Vanopfuura hafu (53%) yevashandi veUS vanofunga kuti indasitiri yavo inoda mumisangano-yemunhu kuti vararame, chidzidzo chitsva chakawanikwa.
Kuongororwa kwevashandi chiuru vekuUS kwakaongorora maitiro kumisangano yebasa uye kufamba kwebhizinesi. Yakaburitsa pachena kuti chete 1,000% yevashandi vanofunga kuti kumeso-kumeso misangano yakafa, neasara makumi manomwe nemana muzana anotenda mumisangano-yemunhu akakosha mune ramangwana rebhizinesi.
Vanopfuura hafu (53%) vanoti zviri nyore kuvimba nekutengesa kwe-munhu pamusoro peInternet, iine 64% ichiti kiyi yekutenda kusangana kwevanhu. Zvakare nekuwedzera kuvimba kana uchisangana nemunhu, ongororo yakaratidza kuti kufamba kumisangano -munhu kunobatsira sei - 60% ye US Vashandi vakati vanoita gadziriro yakawanda yemisangano-yemunhu kupfuura zvavanoita misangano chaiyo.
Tsvagurudzo yakatarisa kune yakazara maitiro kune kufamba bhizinesi, vachiona kuti vazhinji vashandi vane shungu dzekudzoka pakufamba kuenda kubasa. 41% vakati vanoona kufamba kwebhizimusi sechimwe chinhu chinowanikwa kubva kudenda, ne40% vachiti kufamba bhizinesi kuchakosha kwavari kana vachitsvaga basa idzva. Yakaratidza kuti zvizvarwa zvidiki zvinoshuvira kufamba bhizinesi, nehafu inopfuura hafu (54%) yevane makore gumi nematanhatu kusvika makumi maviri neshanu vachiti kufamba kwebhizinesi kwakanyanya kubva pachirwere ichi, zvichienzaniswa ne16% chete yeanopfuura makore makumi mashanu nemashanu. Zvakare nekuda zvimwe mu-zvemunhu zviitiko, iwo madiki madiki anowana kufamba kuchikurudzira. Vanopfuura hafu (24%) veGen Z vanoti akanakisa mazano ebhizinesi anoitika uchifamba, zvichienzaniswa nesingasviki yechishanu (13%) inodarika makumi mashanu nemashanu.
Chidzidzo ichi chakatarisawo nzira dzekuwedzera, zvichiratidza izvo vanhu vanonzwa vakasununguka kuburitsa pavanenge vachienda kubasa. Yakawana vanhu vakanyanya kugadzikana vachiburitsa chikafu, ne83% vachiti vaizodzoka kuzodya muresitorendi. Izvi zvinodonha kana uchitarisa kusevhisi yekamuri, iine chete 57% inonzwa kugadzikana kuburitsa chimwe chinhu chavakaraira kukamuri ravo. Vanopfuura chete chikamu chechina chevashandi (26%) vanganzwa vakasununguka kuburitsa doro pacharo, nevarume vakasununguka kupfuura vakadzi (16% vs 8%) uye Gen Z nemireniyamu vakasununguka kupfuura vanopfuura makumi mashanu nemashanu (55% vs 36%).
Chikafu chinoramba chiri pamusoro pechinyorwa kana uchitarisa zvinotarisirwa nevashandi kana uchifamba. 72% inoda kuenda kunodya panguva yebhizimusi rwendo, ne69% vachida kugara muhotera yakanaka uye inopfuura hafu (55%) vachida kushanyira zvinokwezva zvemuno. Kushanyira nzvimbo yekurovedza muviri hakuna kunyanya kuzivikanwa (24%), nepo vanopfuura chetatu (39%) vachida kuenda kunorara kana vachifambira bhizinesi. Kuongorora maindasitiri, yakawanikwa HR ndiyo mhuka hombe dzemabiko, ne56% vachiti husiku chinhu chakakosha pakushanyira kumwe kutsva kwebhizinesi.
Mushure megore rinopfuura rekure uye musanganiswa kushanda, pakave nekukurukurirana kwakawanda pamusoro pekuti kumba kana hofisi ndiyo inonyanya kubatsira kuvashandi. Zvakawanda US vashandi vachiti kufamba bhizinesi iri yakawanda yezvinhu zvino kupfuura nakare kose. Muchokwadi, 34% vakati vane yavo yepamusoro bhizimusi mazano pavanofamba kuenda kubasa, vachiratidza kuti zvinokurudzira sei kubuda munyika nekusangana nevanhu vekuonana navo mumunhu zvingave.
Nepo mukana wekugona kusvetukira paZoom kufona yemisangano isinganyanyo kukosha inogona uye inofanirwa kuzivikanwa, kazhinji mazano akanakisa, hukama hwakanakisa - uye mhedzisiro yakanaka - inoitika kana vanhu vafamba uye vakasangana vakatarisana.